यदि अभिषेक बच्चन नभइदिएका भए…. ‘तिम्रो एकमात्रै चिज राम्रो छ, जसमा मलाई जलन हुन्छ र त्यो हो तिम्री सुन्दर श्रीमती’ – Kavrepati
Home / मनोरंजन / यदि अभिषेक बच्चन नभइदिएका भए…. ‘तिम्रो एकमात्रै चिज राम्रो छ, जसमा मलाई जलन हुन्छ र त्यो हो तिम्री सुन्दर श्रीमती’
यदि अभिषेक बच्चन नभइदिएका भए…. ‘तिम्रो एकमात्रै चिज राम्रो छ, जसमा मलाई जलन हुन्छ र त्यो हो तिम्री सुन्दर श्रीमती’
admin September 14, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 84 Views
ऐश्वर्या राय र अभिषेक बच्चन १४ वर्षदेखि निकै सुन्दर वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छन् । यी दुई एक छोरी आराध्याका अभिभावक पनि हुन् । हुन त ऐश्वर्या र अभिषेक बच्चनले थुप्रै फिल्ममा काम गरेका छन् तर ‘गुरु’ बाहेक यी दुईका अरु फिल्मले खासै धुम मच्चाउन सकेनन् ।
यसै कारण थुप्रै पटक अभिषेक बच्चनलाई उनको अभिनयका लागि पनि ट्रोल गरिन्छ । केही महिनाअघि अभिषेकको फिल्म ‘द बिग बुल’ आएको थियो । यसको ट्रेलर लञ्चमा एक व्यक्तिले अभिषेक बच्चनकी श्रीमती ऐश्वर्या रायको विषयमा केही निजी कमेन्ट गरेका थिए जसमा अभिषेकले जवाफ फर्काएका थिए ।
यी व्यक्तिको कमेन्ट देखेर अभिषेक बच्चन असाध्यै रिसाए । उनले पनि आफ्नै शैलीमा उनलाई जवाफ फर्काए । अभिषेक बच्चनले जवाफमा लेखेका थिए – तर म यो थाहा पाउन आतुर छु कि तपाईंले कसको बारे कुरा गरिरहनु भएको छ ? किनभने तपाईंले त धेरैलाई नै ट्याग गर्नुभएको छ । मलाई इलियाना डिक्रुज र निक्कीको विवाह भई नसकेको बारे त थाहा छ । त्यसैले म, अजय कुकी र सोहम बाँकी भयौँ । डिज्नी प्लसको वैवाहिक स्थितिबारे पनि चेक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो ।’
Previous यिनै हुन् दैलेख माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक जसलाई निर्मम तरिकाले ह’ त्या ग रियो , विद्यालयको बरण्डामा फेला पर्यो शव
Next प्रियंका र निकले किने नयाँ घर